Katara - Wikipedia
I Katara dia firenena ao Atsinanana Akaiky any Azia, izay manana morontsiraka ao amin’ ny Hoala Persika. Ny renivohiny dia i Doha. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mirefy 11 571 km2 ny velarantaniny ary miisa 1 903 447 ny mponina araka ny fanisana natao tamin' ny 2013. Ny faritr' ora dia +3.
Sainan' i Katara
Saritanin' i Katara
Saikanosy lemaka, saika tany efitra maina, ny tanin’ i Katara. Fasika midadasika no hita ao atsimo, fa ny ao avaratra kosa dia takotra zavamaniry.
Ny mponina ao Katara, izay atao hoe Katary, dia saika Bedoina Arabo, izay mahatratra 20°n’ ny mponina. Ny 80°n’ ny mponina dia mpitady ravinahitra avy any ivelan’ ilay firenena. Manaraka ny fivavahana silamo ny ankabetsahan’ ny mponina.
Ny fitrandrahana solitany no seha-pamokarana voalohany mampidi-bola any Katara. Ny mpitondra ny firenen’ i Katara dia emira, ka atao hoe emirata ity firenana ity. Nahazo ny fahaleovan-tenany ilay firenena tamin’ ny 1971.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Katara&oldid=1046070"
Dernière modification le 30 Jiona 2022, à 12:09
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2022 amin'ny 12:09 ity pejy ity.